को हुनु अर्चना पनेरू, कसको आडमा पोर्नस्टार बन्न खोज्दै छिन? – Halkaro
छारीको इच्छा पोर्नस्टार बन्ने छ सपोर्ट गरेँ, के गल्ती गरे ?ः आमा
बुवा भोजराज प्रश्न गर्छन ‘पोजेटिभ कामलाई साथ नेकगेटिभ कामलाई कसरी साथ दिने ?’
काठमाडौँ, असोज ३० । यतिवेला सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर, फेसवुक, युटुवमा चर्चामा छन् एउटी नेपाली चेली महेन्द्रनगरकी कक्षा १० मा पढ्ने एउटी नेपाली चेली जसले आँफूलाई पोर्न स्टार बनाउने सपना बोकेकी छन् । त्यस्तै उनकी आमा जसले आफ्नी छोरीलाई पोर्नस्टार बनाउने अठोट लिएकी छन् । उनको बुबा जो यतिवेला गुमनाम छन् । को हुन् कञ्चनपुर जिल्ला महेन्द्रनगरकी अर्चना पनेरु ? एउटी नेपाली चेलीमा कसरी आयो पोर्नस्टार बन्ने सपना ? एउटी आमाले किन राखिन छोरीलाई पोर्न स्टार बनाउने अठोट ? यीनै सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेकी तथा नेपाली पोर्नस्टारको उपाधि दिइएकी पनेरुको वास्तविकता, उनको परिवारको वास्तविकता पनेरु परिवारकै मुखबाट हामीले वोलाउने प्रयास गरेका छौँ । यो आलेख पनेरु परिवारसँग गरिएको कुराकानीको आधारमा तयार पारिएको हो ।
अहिले अर्चना र उनको परिवार सामाजिक वहिस्कारको अवस्थामा छ । अर्चना विद्यालयबाट निस्कासित भएकी छन् । प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरी आगामी दिनमा सामाजिक सद्भाव र अश्लिलता फैलाउने काम बन्द गर्ने सर्तमा छाडेको छ । तर पनि अर्चनाको फेसवुक तथा ट्वीटरमा उस्तै उपस्थिति देखिएको छ । उनको नाममा एडल्ट व्लग पनि खोलिएको छ । जसमा प्रवेश गर्नको लागि तीन तह पार गर्नुपर्ने हुन्छ । व्लग भित्र प्रवेश गरेपछि त्यहाँ विभिन्न विदेशी युवतीका न्यूड तथा यौन सम्पर्क गरेका तश्विरहरु छन् । त्यस्तै नेपाली नायिका नम्रता श्रेष्ठको स्काण्डल भिडियो राखिएको छ । यो व्लगको बारेमा उनले केही बताउन चाहिनन् ।
सुनिता पनेरु अर्चनाकी आमाः
मेरो माइतिघर नेपाल नै हो । म यही जन्मिएकी हुँ । म यहीँ हुर्किएकी हुँ । मेरो विहे भएपछि म मुम्बई गएकी हुँ । १५ सालमा मुम्बई बसेँ । त्यसपछि म यहाँ आएँ । यहाँ आएको पनि आठ वर्ष भयो । म पनेरु हुँ डढेलधुराको माइती बोहोरा हो । म ठूलो भएर सिंगर बनौँला, एक्टर बनौँला, पढौँला, यस्तो बनौला भन्ने मैले सोच सपना राखेको थिएँ । तर त्यो पुरा हुन सकेन् । नेपाल जन्मिने वित्तिकै महिलाहरुलाई नपढाउने, आफ्नो इच्छाको कुरा गर्न नदिने, एउटा आमावुवाले जे भन्यो त्यही मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले मेरो इच्छा जाहेर गर्नेवित्तिकै उहाँहरुले मेरो विवाह गरिदिनुभयो । त्यहीनेर मेरो सबै सपनाहरु खत्तम भयो । आज मैले जे बन्छु, जे गर्छु, नेपालको लागि केही बन्छु भन्ने थियो मैले गर्न सकिन भने मेरो बच्चालाई उनीहरुको इच्छा पुरा गर्न सहयोग गर्छु उनिहरु जे बन्न इच्छा राख्छन् त्यमा उनीहरुलाई सपोर्ट गर्छु । त्यही मात्र मेरो चाहना हो । मेरा दुईवटा बच्चा छन् । उनीहरु भनेका मेरा आँखा हुन् । यही नै मेरो संसार हो दुनियाँ हो ।
के आफ्नै आँखाको नानी फुटाउन खोज्दै छिन त सुनिता ?
पोर्न स्टार बन्नु समाजले नराम्रो भनिरहेको छ तर मलाई लाग्दैन यो नराम्रो हो । पोर्न स्टार बन्नु मलाई विल्कुल नराम्रो लाग्दैन । मेरो छोरीको लक्ष्य हो पोर्नस्टार बन्ने । मैले मेरी छोरीको लक्ष्य पुरा गराउन खोज्दै छु । त्यो मेरी छोरीको आँखा फुटाउन खोजेको होइन् । मैले मेरी छोरीको लक्ष्य पुरा गर्न खोज्दै छु । की पोर्न स्टार बन्न गलत छ भन्छ दुनियाँले, सर्ट कपडा लगाउन गलत छ भन्छ दुनियाँले, यस्तो भनेको महिलालाई बन्धनमा बाँध्न खोजिएको हो । सर्ट कपडा नलगाउ, बाहिर नजाउ यही भन्न खोजिएको हो ।
सेक्स गर्नुमात्र पोर्न स्टार होइन्
पोर्नस्टार भनेको समाजले सोचेको जस्तो पोर्नस्टार होइन् । सेक्स गर्नु, सेक्स सिन दिनु मात्रै पोर्नस्टार हो भने मेरी छोरीले सेक्स सिन दिँन्न् । तर नेकेड (न्यूट) फोटो चाही मेरी छोरीले खिचाउन सक्छ । मेरी छोरीले नेकेड सिन दिन्छ । नेकेड सिन गर्दैमा उसलाई गलत, र नराम्रो कुरा भन्न सकिँदैन् । यदी मेरी छोरीले राम्रो फिल्ममा नेकेड सिन दिन्छ उसको लागि पोर्नस्टार भनेको सेक्समात्र पनि हुँदैन् । सेक्स सिनको पोर्नस्टार उसले गर्ने होइन् । पोर्नस्टारको रुपमा नेकेड सिन उसले दिन सक्छ । र गर्ने हो । मेरी छोरीले पोर्नस्टार सेक्सबाट बन्छु भनेर कहिल्यै कदापी पनि भनेको छैन् । भन्ने पनि छैन् । सेक्स गरेर पोर्नस्टार बन्नु हो भने त्यो पोर्नस्टार मेरी छोरी बन्दिन् । मैले बनाउँदा पनि बनाउँदिन । पोर्नस्टारको मतलव एउटा नेकेड (नांगो) सिन (फोटो÷भिडियो) दिने भनेको हो । यदी कुनै फिल्ममा नेकेड सिन दिनु पर्छ भने उसले दिन सक्छ भनेकी हुँ । नेकेड सिन उसले गर्न पनि सक्छ र गर्ने पनि हो । सेक्सकै फिल्म बन्छ भने, पोर्नस्टार सेक्स गरेर हुन्छ भने मेरी छोरीले गर्दिन त्यो बाटो हामीहरु जाँदैनौँ । पोर्न भनेको हामीले व्लु फिल्म भन्ने मात्र बुझेका छौँ सिर्फ त्यो होइन् ।
सुनिताको परिभाषमा बाझिएको पोर्नस्टारको परिभाषा
यदी पोर्न स्टार बन्छ भन्ने वित्तिकै मैले भनिरहेको छु नेकेड सिन दिनु नराम्रो होइन् । समाजले पनि भन्नु हुँदैन् । सेक्स गर्नु हुँदैन् । यो कसैले पनि गर्न हुँदैन् । अहिले मेरी छोरीले पोर्न स्टार बन्छु भन्दै छ । नेकेड सिन दिन्छु भन्दै छ । अहिले म छु उसलाई सपोर्ट गर्ने । पछि यो समाजले पनि गर्छ । देशले पनि सपोर्ट गर्छ मैले पुरा आशा गरेको छु ।
यो परिणामको अपेक्षा थिएन्
समाजमा गलत गर्नुहुन्न मलाई थाहा छ । यो फोटोले यस्तो होला भन्ने थाहा भएको भए अपलोड गर्नेनै थिएनौँ ।
रुँदै सुनिताले गरीन् समाजलाई प्रश्नः के छोरी हुँदैमा बाहिर निस्कन पाइँदैन् ?
म कसैलाई यो कुरा भनेकी छैन् । तपाईँलाई साथी जस्तो ठानेर भनेकी छु । मलाई पनि मढ्ने इच्छा थियो । तर पढ्न दिइएन् । छोरी भनेको अर्काको घर जाने बस्तु हो ? के छोरीले बाहिर निस्कन पाईँदैन् ? आज मलाई कसैले के भन्दै छन् । कसैले के भन्दैछन् । आज एउटी आमाको सपोर्ट नहुँदा म यस्ती भएँ । मेरी छोरीलाई मैले सर्पोट गर्द किन यस्तो भनिँदै छ ? दुःख लागेको छ ।
आमाले देखाएको सपना पोर्न स्टार बन्नुका अलावा अर्चनाका आफ्नै सपनाहरु पनि छन् । उनलाई नृत्युसँगै अभिनय र डिजाइनिङ् उनको रुची हो । उनी भन्छिन्, ‘म पछि ठूलो भएर फेसन डिजाइनिङ् कोर्ष चाँही गर्छु ।’ अहिले फेसवुक डिएक्टीभ गरेको बताउने उनले ट्वीटर भने चलाइरहेको बताईन् । उनको नाममा ट्वीटरमा पनि दुईवटा एकाउन्ट छ । फेसवुकमा गरिएका अश्लिल कमेन्ट र फोटोको बारेमा उनको फरक धारणा छ । उनी भन्छिन्, ‘हो मेरा फोटा कम्प्यूटरबाट नंगाइएको छ, त्यो ठूला स्टारहरुको पनि हुन्छ मेरो पनि भयो ।’ फेसवुकले यस्तो काण्ड मच्चाउला भन्ने थाहा नभएको उनी बताउछिन् । ‘चर्चाको लागि फेसवुक राम्रो माध्ययम हो भन्ने थाहा थियो तर यस्तो गलत निक्लेला भन्ने थाहा थिएन् ।
आफ्नै भविष्य कता जाँदै छ ?
मैले ममीलाई पहिले भनेको हुँ ‘ममी म सिम्पल एकट्रेस बन्नु भन्दा सन्नी लियोनको जस्तो नेकेड सुट र सर्ट ड्रेसमा सुट गर्न चाहन्छु । मैले अरु कोर्ष (पढाई)पनि गर्छु । तर यो एम (लक्ष्य) मेरोलागि सबै भन्दा ठूलो कुरा हो । यो लक्ष्य मेरा बडी र सोल (शरीर र आत्मा) को बराबर छ । पहिला त मलाई सिम्पल एक्ट्रेस नै बन्ने मन थियो । तर पछि जब मैले सन्नी लियोनका फोटो सुट हेरेँ । नेकेड फोटो सुटहरु हेरेँ । सर्ट ड्रेस सुट हेरेँ त्यसपछि मलाई लाग्यो की सिम्पल भन्दा केही नयाँ गरुँ । त्यसपछि नेकेड फोटो सुट गरेँ । अनि सन्नी लियोन जस्तो बने । सन्नी लियोनले पनि नेकेड फोटो सुट गरेको छ, सर्ट लुगा लगाएको छ र सेक्स पनि गरेको छ । मैले सन्नी लियोनका सेक्स बाहेकको कुरा अपनाउन चाहन्छु । सर्ट ड्रेस, नेकेड फोटो सुट गर्न चाहन्छु । मैले सन्नी लियोनको जीवनको बारेमा त्यति सुनेको छैन् । तर उसको फोटोसुटहरु हेरेको छु ।
नेपालमा पाइँदैन भने विदेशको विकल्प
यदी नेपालमा यो चल्दै भने मैले विदेशमा गएर नेकड फोटो सुट तथा नेकेड फिल्म बनाउने सोचेको छु । मलाई ‘साइ’ (लाज) हुँदैन नेकेड फोटो सुट गर्न म गरिहाल्छु ।
सन्नी लियोन बन्ने सपना बोकी उनलाई सन्नी लियोन को हो ? उसको बारेमा खासै कुरा थाहा छैन् । उनी भन्छिन्, ‘उनको बारेमा त्यती जानकारी छैन अध्ययन पनि गरेको छैन् ।’
चर्चाको लागि होइन ‘नेकेड’ सुट
मलाई नेकेड सुटहरु नै मन पर्छ । मलाई नेकेड बाट नै स्टार हुनु छ । नेकेड बाट नै फेमस हुनु छ । यो चर्चाका लागि भन्दा पनि मेरो लक्ष्य नै हो पोर्नस्टार बन्ने हो । मैले फेसन डिजाङ् कोर्ष गर्छु भनेकी छु । त्यो पैसाका लागि हो ।
को हुन मोहन घिमिरे ?
म भोजपुरी फिल्ममा खेल्ने फिक्स भएको छ । डाइरेक्टर को हुने फिक्स छैन्, मिटिङ भएपछि थाहा हुन्छ । तर प्रोड्युसर हो मोहन घिमिरे सर ? दुई हप्ता अगाडि काठमाडौमा मिटिङ भएको थियो । फिल्म फिक्स भइसकेको छ । अबको मिटिङले डाइरेक्टर फिक्स हुन्छ । यो हप्ता वा फ्राइडे वा अर्को हप्ता उहाँ यहाँ आउनु हुन्छ ।
समाजले पचाउँदैन तर गर्छु
मलाई थाहा छ यस्तो कुरा समाजले पचाउँदैन् । पचाएन पनि । पुलिसले पक्राउ गर्यो मुद्दा हालियो । तर पनि म कोसिस गर्छु यही ठाँउमा आफ्नो सपना पुरा गर्न । कोसिस गरे सफल भइन्छ । यदी कोसिस गर्दा पनि भएन भने म ‘फरेन’ गएर पनि आफ्नो सपना पुरा गर्छु ।
ड्याडीको फुल सपोर्ट छ
ड्याडीको साथीहरु लण्डनमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुले बोलाउनु भएको छ । मैले फेसन डिजाइनिङ कोर्ष गर्ने हो । त्यसको लागि पनि लण्डन जान्छु नेकेड फोटोसुट पनि उतै गर्छु । ड्याडीको फुल सपोर्ट छ । मैले विभिन्न समाचारमा भनेको छु की ड्याडीले नै मलाई सर्ट ड्रेस ल्याइदिनुहुन्छ । ड्याडीको सपोर्ट विना यो हुनै सक्दैन् । नेकेड सुट हुँदा पनि ड्याडी उतै हुनुहुन्छ ।
प्रेमीले अष्ट्रेलिया बोलाएको छ
मेरो व्याय फ्रेण्ड छ । अष्ट्रेलियामा ज्याक विल्सन । सात महिना भयो अफेयर भएको छ । फेसवुकबाट सम्पर्क भएको हो । उहाँको पनि सपोर्ट छ । तिमीलाई नेपालमा नेकेड सुट गर्न मिल्दैन भने यतै आउन यतै गरौली भन्नुहुन्छ ।
पोजेटिभ काम गरे त साथ दिने हो तर नेगेटिभ काम गरे कसरी साथ दिने ? अब सर्ट कपडा भनेको सुहाउने कपडा हो । त्यो कपडा मैले ल्याइदिएको हैन् तिनीहरुलाई । आफ्नो मर्जीले ल्याएको हो कपडा तिनीहरुले । फोटोसेसनको कुरा जुन छ तीनहरुले जुन फोटो सुट गरेको छ म त्यसको सपोर्टिङ्मा छैन् । मलाई आज तपाईँले भनेपछि मात्र थाहा भयो । नत्र मलाई थाहा थिएन् । मैले फेसवुक पनि चलाउँदिन । राम्रो काम गर म सपोर्ट गर्छु भनेको हुँ । समाजलाई पच्ने काम गर भनेको हुँ । उनीहरुलाई राम्रो गर भनेर सजेसन दिएको हुँ । तिनीहरुले के के गरे मलाई थाहा छैन् ।
← व्यवसायीक जीवनमा सफल दिनेश
मोदीसँग मनका कुरा →